Tel Aviv ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်း ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, တဲလ်အဗစ်
မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာအစ္စရေးရဲ့မြို့ဖြစ်တယ် တဲလ်အဗစ်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်သည် နိုင်ငံရေးအခြေအနေသည်Israelသရေလနိုင်ငံရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမဟုတ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာနှစ်စဉ်ထောင်နှင့်ချီသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုယင်းကိုကြည့်ရှုရန်မတားဆီးနိုင်ပါ။
နှင့်ဂျေရုဆလင်ကျော်လွန်။ , တဲလ်အဗစ်သည်သွားရောက်ကြည့်ရှုထိုက်သောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာငါတို့အကြောင်းကိုလက်တွေ့ကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်အချို့ထားခဲ့ပါ Tel Aviv မှာဘာလုပ်ရမလဲ.
2 Tel Aviv မှာဘာလည်ပတ်မလဲ
3 တဲလ်အဗစ်၌ ၂၄ နာရီ
၎င်းကို ၂၀ ရာစုအစတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယင်း၏အမည်ကိုဟေဗြဲဘာသာမှပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည် စမ်းရေတွင်း။ အချိန်အတော်ကြာ၎င်းသည်ယာယီမြို့တော်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲတွင်အီဂျစ်နှင့်အီရတ်တို့ကပင်ဗုံးကြဲခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကီလိုမီတာ ၆၀ သာဝေးသောယေရုရှလင်နှင့်မဝေးလှပါ Haifa ကနေ 90 ပဲ။ ပူနွေးသောနွေရာသီနှင့်အေးမြသောဆောင်းရာသီရှိသည်။
ငါအထက်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ Bauhaus ဗိသုကာအဆောက်အအုံများကိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အုပ်စုတစ်ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတလွှား၌ဤကဲ့သို့သောအဆောက်အအုံများရှိသည်။ သို့သော်နာဇီများမွေးဖွားခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ဂျာမနီမှပြောင်းရွှေ့လာသူဂျူးများရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်တဲလ်အဗစ်၌ရှိသကဲ့သို့များပြားလှသောအဆောက်အအုံများမရှိပါ။
Tel Aviv မှာဘာလည်ပတ်မလဲ
အဲဒီမှာ ရပ်ကွက်ငါးခု မြို့တော် - White City, Jaffa, Floretin, Neve Tzedek နှင့်ကမ်းခြေဟုခေါ်သောမြို့။ White City သည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်သည် ၎င်းသည် Allenby လမ်းနှင့် Begin နှင့် Ibn Gvirol လမ်းများ၊ Yarkon မြစ်နှင့်မြေထဲပင်လယ်ကြားတွင်ရှိသည်။ အဆောက်အ ဦး အားလုံးသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Rothschild Boulevard တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရမယ်၊ ဗဟိုမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့သာယာလှပတဲ့ kiosk တွေ၊ အေးမြတဲ့ကဖေးများနှင့်စျေးဆိုင်များ။ ထို့အပြင်တဲလ်အဗစ်၏သင်္ကေတဖြစ်သော Sheinkin လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ၎င်း၏စပျစ်သီးသိုလှောင်ရုံများ၊ ရတနာများနှင့်ကဖေးများနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။
ဂျက်ဖာ၏ တဲလ်အဗစ်မြို့၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် ဆိပ်ကမ်းဟောင်း အချိန်ကတဆင့်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လေထုဟောင်း၊ ခွေးလှေးစျေး၊ လမ်းများနှင့်ဂျူးနှင့်အာရပ်ယဉ်ကျေးမှုများ၏အရောအနှောရောနှောခြင်းအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းသည်လှေငယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကဖေးများ၊ စျေးကွက်နှင့်တဲလ်အဗစ်မြို့နှင့်အဝေးမှမြင်ကွင်းများနှင့်လည်းနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Floretin ၎င်းသည်တောင်ဘက်သို့လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည် Tel Aviv ရှိ Soho။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲမှုရှိသော်လည်းရပ်ကွက်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားစွာပြောင်းလဲခြင်းမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခြားနားချက်များကိုတွေ့မြင်လိုပါက၎င်းသည်ပိုမိုဆင်းရဲသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Levinsky Market မှဂရိ၊ တူရကီနှင့်ရိုမေးနီးယားထုတ်ကုန်များနှင့်သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ သင်ညအိပ်တည်းခိုလျှင်စျေးပေါသောအရက်ဆိုင်များနှင့်စင်တာမှလူများလာလေ့ရှိသည်။
Neve tzedek ထို့အပြင်တစ်ခုဖြစ်သည် တဲလ်အဗစ်၏ရှေးအကျဆုံးခရိုင် ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်ဖက်ရှင်ဖြစ်လာသည်နှင့်အတော်လေးပွနျလညျထူထောငျခဲ့သညျ။ ၎င်းသည် ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှစတင်ခဲ့ပြီး Jaffa အပြင်ဘက်တွင်ပထမဆုံးဂျူးရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ လမ်းကျဉ်းလေးများ၊ အရှေ့တိုင်းဗိသုကာများ၊ ပြခန်းများ၊ ဖက်ရှင်ဆိုင်များ၊ ဒီဇိုင်နာဆိုင်များနှင့်အရက်သောက်သည့်စားသောက်ဆိုင်များရှိပြီးစားသောက်ဆိုင်များကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
နောက်ဆုံးတော့အဲဒီမှာရှိတယ် တဲလ်အဗစ်ကမ်းခြေ ထိုမြို့၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဆန့်ကျင်မိုင်ဘို့ဖိဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် အရှည်ဆုံးမြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခု နွေရာသီတွင်အထူးသဖြင့်၎င်း၏ပူနွေးသောရေကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်လာကြသည့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ဒေသခံများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ကျယ်ပြန့်စွာနေထိုင်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်နေရာရှိသည်။ Hilton ဟိုတယ်ရဲ့ကမ်းခြေတောင်မှလိင်တူချစ်သူကမ်းခြေမှာထူးချွန်သူတစ်ယောက်လို့လူသိများပြီး Gordon-Frishman ကမ်းခြေကတော့ဖက်ရှင်ကျတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ငှက်ပျောသီး၊ Dolphinarium နှင့် Alma သဲသောင်ပြင်များလည်းရှိသည်။
တဲလ်အဗစ်၌ ၂၄ နာရီ
သင်ဂျေရုဆလင်မှာရောက်နေပြီးတဲလ်အဗစ်ကိုထွက်ခွာချင်ပါသလား။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဟာနည်းနည်းလေးစီစဉ်ရမယ်၊ စောစောထွက်ပြီးအားယူရမယ်။ သငျသညျနွေရာသီ၌သွားလျှင်, သင်သည်ပင်လယ်ကမ်းခြေနံနက်စာသုံးဆောင်ခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်ဖို့ Jaffa အတွက်စတင်ရန်ဒါကြောင့်သင်ကကမ်းခြေပေါ်မှာနာရီစုံတွဲများဖြုန်းနေကြတယ်။ Neve Tzedek နောက်တံခါးပေါက်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကအဲ့ဒီ့ခရီးကိုထည့်ပြီးနေ့လည်စာစားလို့ရပါတယ်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်သင်သည်ကမ်းခြေကိုပျော်မွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်များစွာသောထဲကတစ်ခုသို့လည်ပတ်ခြင်းအကြားရွေးချယ်နိုင်သည် တဲလ်အဗစ်ရှိပြတိုက်များဂျူးလူမျိုးပြတိုက်၊ အစ္စရေးပြည်ပြတိုက်၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်၊ Bauhaus ပြတိုက် (တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်သောကြာနေ့သာဖွင့်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ) ,, Tel Aviv သမိုင်းပြတိုက်၊ Azrieli လေ့လာရေးစင်တာနှင့်မြို့နှင့်ကီလိုမီတာ ၅၀ ကီလိုမီတာကမ်းရိုးတန်းကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်အနုပညာထံအပ်နှံပြတိုက်။
ညအချိန်တွင်မြို့တစ်မြို့ရှိသည် အလွန်ကောင်းသောညဥ့်ဘဝ ဒါကမနက်တိုင်းပါ။ ညစာစားဖို့သွားနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ကခုန်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဘားတန်းကိုသွားမယ်၊ အဲဒီနေရာတွေကညသန်းခေါင်မှာသာပြည့်နေတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် Tel Aviv တွင်တစ်ညတည်းနေမည်ဆိုလျှင်ဒုတိယနေ့၏အားသာချက်ကိုသင်ရယူနိုင်သည် တစ်နေ့တာခရီးစဉ်, getaways ။ မဆာဒါ ငါ့အတွက်ဒါဟာလွဲချော်မသွားတဲ့ပထမဆုံးလေ့လာရေးခရီးပဲ။ အကယ်၍ သင်ဟာအသက် ၄၀ ကျော်နေပြီဆိုရင်၊ Masada လို့ခေါ်တဲ့ဟောလိဝုဒ်ဂန္တ ၀ င်ဂန္တ ၀ င်ကိုမှတ်မိလိမ့်မယ်။
ဤသည်ကရောမတို့၏တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့သည့်တောင်ပေါ်ရှိတောကန္တာရရှိရဲတိုက်နှင့်နန်းတော်အပျက်အယွင်းများ၏အမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အရှုံးပေးခဲ့ပြီးကျန်ရစ်သူများမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်သေခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအစဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်.
သငျသညျ Masada သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ် ဦး လုပ်နိုင်ပါတယ် ပင်လယ်သေခရီးစဉ် ဥပမာအားတစ်ချိန်တည်းမှာ။ သင်လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Ein Gedi အိုအေစစ်, တောင်တက်သွားနှင့်ပုဂ္ဂလိကပင်လယ်သေကမ်းခြေပေါ်မှာဆွဲထား။ ဒါမှမဟုတ်တောင်မှ ပက်ထရာသို့လည်ပတ်ပါ, အိမ်နီးချင်းဂျော်ဒန်၌တည်၏။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီလေယာဉ်ခရီးစဉ်ပါဝင်သည်။ မင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ် ကဲသရိနှင့်ဂါလိလဲပြည်သို့ သွား၍၊အကယ်၍ သင်သည်နောက်လာမည့်ဖြစ်ရပ်အတွက်သမ္မာကျမ်းစာသမိုင်းကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပါကခရီးစဉ်တွင်လည်ပတ်ခြင်းပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် နာဇရက်မြို့သား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » တဲလ်အဗစ် » တဲလ်အဗစ်ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်း